Xirfadaha Mnemonic – Sidee ku baran kartaa xirfadaan? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sidee Loo Baara Borotiinka Kujira Dhiigga?
Xirfadaha Mnemonic – Sidee ku baran kartaa xirfadaan?
Mnemonic waa xirfado iyo istaraatigiyado shaqsigu u isticmaalo in uu si sax ah wax u xasuusto, waxay siyaadisaa shaqada maskaxda, waxaa soo saaray Gerald Miller 1967dii, waxa uuna ku difaacay mnomnic in ay siyaadiso xasuusashada si wanaagsan, waxa uuna yiri “ardeydii isticmaashay xirfadaan waxay siyaadiyeen dhibcohoodii awal 77%”
Xirfadaha mnemonic-ga way noocyo badan yihiin laakiin qayb ka mid ah baan halkaan kusoo qaadan doonaa.
1. Connection mnemonic: waa istiraatigiyadda qofku isku xirayo xogta loo sheegay ama uu akhriyey iyo xog kale oo uu yaqaan ama xifdisan yahay.
Tusaale: waxaa laguu sharaxay qaabka ay calooshu usamaysan tahay, kadibna si aad u xifdisid una xasuusatid aad dhahdid calooshu waxay u eg tahay xarafka “J” si daraadeed labo xog baad isku xirtay mana ilaawaysid waligaa.
Markaad akhrisid muqaalka guud(Map) qaaradda Yurub rabtidna inaad xasuusatid, wadanka Itali qaab ahaan waxuu u eg yahay qaabka doonta marka si fudud baad u xasuusanaysaa.
Haddii lagaaga sheekeeyo ama aad akhrinaysid hab dhaqanka bulshooyinka kale, waxaa maskaxdaad kusoo dhacaysa ama aad sawiranaysaa hab nololeedka Soomaalida ama kuwo kale oo aad taqaanid hab dhaqanka kooda hadhowna way kuu fududaan xasuusasha hab nololeedkaas.
2. Clustering (kooxayn): waa qaab loo kooxeeyo xogta si aad u xasuusatid, tusaale haddii aad rabto inaad xifdidid wadamada ku yaalla qaaradda Afrika, way kugu adag tahay inaad inta taxdid in aad xifdisid ama si dhaqso ah kusoo xasuusatid, balse haddii aad toban toban ukooxaysid ama jihooyinka ay ku yaalaan u kooxaysid, way kuu fududaan inaad xasuusatid xifdididna.
Hadii aad damacdid inaad xasuusatid lambarkaan: 196823456 wuu tiro badan yahay maskax mashquul baad ka dhaxlaysaa lakiin hadii aad kooxaysid way fududaanayaan 196, 823, 456. Kuma jiraan dadka ilaahay xasuusta iyo fahanka dheer ku manaystay.
3. Name mnemonic (erayada): qaabkan dad badan baa isticmaala, waana soo gaabinta erayada, haddii aad xasuusan waydo kalmado ama qoraalo aad maalinkasta aragto, waxaad ku xasuusan kartaa adigoo hal eray kusoo kooba earayadaas tusaale: miraha yicibta waxay maraan heeraarkaan soo socda 1. Cir ujeed, 2.Balag, 3. Dib udey 4. Gees, 5. Kaalmoon, 6. Beer.
Hadii aad isticmaashid erayadaan CBDGKB, ama erayo u dhow oo adi macno kuu samaynaya way fududaanaysaa inaad xasuusatid.
4. Model mnemonic: qaabkan waa qaab ka adag qaababkii hore, waa xirfadda aad si fudud ugu xasuusatid cashar ama qoraallo tiro badan, hadii aad aad xifdin waydo geeddi socod(procces) dheer waxaad ku xasuusan kartaa inaad ka dhigtid wareeg goobo.
Tusaale: Markaad qof baratid cusub, magaciisana laguu sheego si dabiici ah baad magaciisa iyo wajigiisa isugu xiraysaa, balse maskaxd markasta sawirka ma ilowdo, mar marka qaar qofkii markaad aragtid wajigiisa maskaxdo way soo saareysaa laakiin magaciisii badanaa waad ilaawaysaa, waxaad ku dhahaysaa saaxiib wijigaagu wuu igu yaallaa laakiin magacaagii maxuu ahaa?. Si aadan u ilaawin isku xir wajigiisa iyo magaciisa
5. Rhyme mnemonic: qaabkaan waa qaab fudud, waxaadna si fudud ugu xasuusan kartaa waxaad qabanaysid ama akhrinaysid qofkastana ma isticmaalli karo laakiin waxaan isticmaali kara qofkii hal abuur leh, cashar aad xifdisay ama aad akhrisay hadii aad ka baqdid inaan xusuusan waydo ama kugu adag tahay inaad xifdisid, waxaad ka dhigaysaa sidii maanso ama gabay ama xigmad kale kuuna sahlaysa inaad xasuusatid, sababtoo ah murtitu way fududahay in la xifdiyo wayna kooban tahay.
7. Music mnemonic: dadku waxay aad u xasuustaan xogta ay ku xiraan musigga heesaha, adigoo marxalad ku jira haddii dhagahaaga ay kusoo dhici jirtay ama maqli jirtay music, markasta oo aad maqashid musiggii, waxaad xasuusanaysaa marxaladii aad waqtigaas ku jirtay, sidaa daraadeed xifdinna waad u isticmaali kartaa.
Tusaale: darawaliinta heesaha qaaraamiga ah dhagaysta, markaad dhulkuu mari jiray wax ka waydiiso, waxuu ku leeyahay halkaas waan xasuusta habaynkaas oo habaynkaas bay ahayd Haliimo Khaliif magool baan dhagaysanayey.
Dadka muslimiinta ilaahy baa u fududeeyey qabashasha(xifdinta), sababtoo tababar maskaxeed buu qaataa qofkasta oo muslim waana xifdinta quraan iyo qaybaha kale ee diinta; waxayna koosaar utahay qabashada iyo furfurista maskaxda.
Waxaa jira kara farsamooyin intaan ka tiro badan, ardeygu hadduu isku dayo inuu la yimaado ha
Tags: Xirfadaha Mnemonic - Sidee ku baran kartaa xirfadaan?
Next post Sidee Qofku Ku Noqdaa Mid Baqli Badan
Previous post Xasuusasho Aan Koobnayn - Si feejignaantu kuugu suurto gasho raac waddooyinkaan